August 25, 2019 - ThutaStar
ခွေးတောက်ွရက် ကို ခေါင်းအုံးအိပ်ခြင်း ဖြင့် ရရှိလာမည့် အကျိုးကျေးဇူးများ
August 25, 2019 Thuta Star 0
ခွေးတောက်ရွက် ခေါင်းအုံး အမျိုးသမီးတယောက် အဲကွန်းခန်းထဲအိပ်ပျော်သွားတယ်။ ဘယ်လောက်အိပ်မိတာ မသိပေမယ့် အေးတာနဲ့ နိုးလာတယ်။ အဲကွန်းပိတ်ပြီး ၁၀မိနစ်လောက် နှပ်နေသေးတာ၊ ရေဆာတာနဲ့ ရေထပြီးသောက်လိုက်တာ (အိုးထဲကရေနော်) ကျောရိုးထဲကနေ ခေါင်းရဲ့နောက်စေ့ကို ဓားအချွန်နဲ့ ထောက်ထားသလို ခံစားလိုက်ရတာ ၃နာရီလောက်နားပြီး ခေါင်းလျှော်ရေချိုးလုပ်ပေမဲ့ ဘယ်လိုမှမသက်သာပါ။ ဘာဆေးသောက်ရင် ကောင်းမလဲ၊ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲပေါ့။ […]
ခွေးတစ်ကောင်က ငွေကျပ် သိန်း ၂၀ ထုပ်ကြီး ကို အစာထင်ပြီး ကိုက်ချီလာ သောအခါ….
မြန်မာစကားပုံမှာ ရေအဆုံး ကုန်းတဝက်ဆိုပြီး ဆိုရိုးစကားလေး တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ရေထဲကျပြီး ပျောက်သွားတဲ့ ပ စ္စည်းဟာ ပြန်မရတော့လို့ ဆုံးရှုံးပြီလို့ သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပြီး ၊ ကုန်းပေါ်မှာ ကျပျောက်သွားတာတော့ တစ်ယောက်ယောက်က ပြန်တွေ့ရင် တစ်ဝက်လောက်တော့ ပြန်ရနိုင်တယ်လို့ ဆိုလိုဟန် တူပါတယ်။ အခုလည်း မသန်းသန်းမော် တစ်ယောက် […]
နှစ်တွေအတော်ကြာတိုင် သစ္စာမပျက်ပဲ ရွှေလက်တွဲနေကြဆဲဖြစ်တဲ့ အနုပညာရှင်စုံတွဲများ…
အခုခေတ်မှာ ချစ်သူရည်းစားတွေက ပြတ်လွယ်ဆက်လွယ်ဖြစ်နေကြတာကို ပရိသတ်ကြီးလဲ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားဖူးမြင်ဖူးနေကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ချစ်သူသက်တမ်းတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး တစ်သက်တာလုံး ရွှေလက်တွဲဖို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ သူတွေလဲ အများအပြား ရှိကြပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးချစ်တဲ့ အနုပညာရှင်တွေထဲမှာလဲ နှစ်ရှည်လများ ရေရှည်တည်တံ့တဲ့ ချစ်သူဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ချစ်သူစုံတွဲတွေလဲ ရှိပါတယ်။ မိုမိုလေး ပရိသတ်တွေအတွက် […]
နောက်အိမ်ထောင် အသစ်အကြောင်းပြောလို့ တုန့်ပြန်လိုက်တဲ့ ဘုဏ်းသိုက်
အဆိုတော် ချမ်းချမ်းဆိုတာနဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ မျက်လုံးထဲမှာ အသံကြည်လင်ပြတ်သားပြီး အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ပြေးမြင်ကြမှာပဲ။ သူနဲ့အတူ ဘုန်းသိုက်ဆိုတဲ့ သူရဲ့အိမ်ထောင်ဖက်ကိုလည်း တစ်ခါတည်းတွဲမြင်ကြသလို၊ သူတို့ရဲ့ ရင်သွေးလေးကိုလည်း မြင်ကြမှာပါ။ အဆိုတော် ချမ်းချမ်းနဲ့ ဘုန်းသိုက်တို့ရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ အိမ်ထောင်ရေးလေး ပျက်သုန်းပြီး၊ ၂ ဦးသား လမ်းခွဲလိုက်ကြပြီဆိုတာလည်း ပရိတ်သတ်ကြီး […]
တခါမှရန်​မရှာဘဲ ကြင်​နာတတ်​လွန်းတဲ့ ခင်​ပွန်းကို ကွာရှင်းလိုက်​တဲ့ အမျိုးသမီး
အခုဖြစ်​ရပ်​က​တော့ အ​ရှေ့အလယ်​ပိုင်းက အာရပ်​နိုင်​ငံတစ်​ခုဖြစ်​တဲ့ ယူ​အေအီးနို​င်​ငံသူ အမျိုးသမီးတစ်​ဦးရဲ့ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်​ရပ်​တခုပါ။ အမျိုးသမီး​တွေ အိမ်​​ထောင်​​ရေးကွဲကွာချင်​ရတဲ့ ပြသနာအ​ကြောင်းရင်းအများစုကို ကြည့်​မယ်​ဆိုရင်​ လင်​​ယောကျာင်္းက ကိုယ့်​အ​ပေါ်မ​ကောင်းလို့၊ မကြင်​နာလို့၊ ရက်​စက်​လို့၊ ​ဖောက်​ပြန်​လို့ စသဖြင့်​သာ အများအားဖြင့်​​ ​တွေ့ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။ အခုဖြစ်​ရပ်​မှာ​တော့ ယူ​အေအီးနို​င်​ငံက အိမ်​​ထောင်​ရှင် ​အမျိုးသမီးဟာ လင်​​ယောကျာင်္းက တခါမှရန်​မရှာဘဲ ကြင်​နာတတ်​လွန်းတာ​ကြောင့်​ […]
မိန်းခလေးတစ်ယောက် အပျိုစစ်မစစ် သိအောင်လုပ်နည်း…. ၁ ။ မင်းမှာ ရည်းစား ရှိရမယ် ( သူများကိုစမ်းသပ်ရင် ပါးရိုက် ခံရမှာပေါ့ ) ၂ ။ ရေဇလုံ ခပ်ကြီးကြီး တစ်လုံးထဲမှာ ရေထည့်ပါ… သင့်ရဲ့ ရည်းစားကို အဲ့ရေထဲ ထိုင်ခိုင်းပါ (ကိုယ်တုံးလုံးကြီး နဲ့တော့ […]
မန္တလေး မြစ်​ငယ်​တံတား​ပေါ်က​နေပီး မိန်းက​လေး၅​ယောက်​ ခုန်​ချ ​သေဆုံး..
မန္တလေး နဲ့ စဥ့်ကိုင်းကြား မန္တလေးမရောက်ခင် ကျောက်စိမ်းဘုရားလမ်းခွဲနားက မြစ်ငယ်တံတားပေါ်ကနေပီး မိန်းကလေး၅ယောက် ခုန်ချ သေဆုံး မန္တလေး နဲ့ စဥ့်ကိုင်းကြား မန္တလေးမရောက်ခင် ကျောက်စိမ်းဘုရားလမ်းခွဲနားက မြစ်ငယ်တံတားပေါ်ကနေပီး မိန်းကလေး၅ယောက် ခုန်ချ သေဆုံးဟု ကနဦးသတင်းရရှိပါသည်။ မည်သည့်အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ် သတ်သေဆုံးရသည်ကို မသိရှိရသေးပါ။ အလွန်ထူးဆန်းသော ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဟု […]
အလှူ ငွေ သိန်း ၆၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေပါဝင်တဲ့ ရန်ပုံငွေ ဘောလုံးပွဲ
အနုပညာရှင်များစုပေါင်းပြီး မွန်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ရန်ပုံငွေ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပရာမှာ အလှူငွေ သိန်း ၆၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့ က မွန်ပြည်နယ် ရေဘေးသင့် ပြည်သူတွေအတွက် အနုပညာရှင်များစွာတို့ စုပေါင်းပြီး ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့နေ့မှာတော့ အလှူငွေနဲ့ လက်မှတ်ဖိုး စုစုပေါင်း အလှူငွေ သိန်း၆၃,၄၆၃,၅၅၀ […]
ကျနော်တို့ မိသားစုတွေတော့ အိပ်လို့ မပျော်ဘူးဗျာ တိုက်ပြေးသွားတဲ့ ကားဆရာရယ် ခင်ဗျား အိပ်လို့ပျော်ရဲ့လား. . .
သို့…. (11.8.2019) ရက်နေ့ ည ၈း၁၅မိနစ် နေပြည်တော် ဘောဂသီရိကားဝန်း အကျော် အိုင်စောက်ရွာ ဘ၀သစ် ဆီဆိုင်အနီးမှာ ဆိုင်ကယ် တစ်စီးကို တိုက်ပြေးသွားတဲ့ ကားဆရာရေ ခင်များ အိပ်ပျော်ရဲ့လား… ကျနော်တို့တော့ ဒီနေ့ထိ အိပ်မပျော်ဘူးဗျာ… (13.8.2019) ရက်နေ့ ကျနော့်အကို ပျောက်လို့ လိုက်ရှာတော့ […]
အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားရင် လုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အရာ (၉) ခု
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းဟာ ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ အချိုးအကွေ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ် …. ။ အများအားဖြင့်တော့ အိမ်ထောင်ကျပြီးတဲ့အခါ နေထိုင်သွားလာမှု ပုံစံတွေ ပြောင်းလဲသွားကြရပါတယ် … ။ တစ်ကိုယ်တည်း ဘဝတုန်းက နေခဲ့သလိုမျိုး အိမ်ထောင်သည် ဘဝမှာ နေဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အိမ်ထောင် ကျပြီးတဲ့ […]